माल्टामा नेपाली कामदारको चर्को माग | नेपाली जनता :: Nepali Janta:
माल्टामा नेपाली कामदारको चर्को माग
श्रम सम्झौताको तयारी
प्रकाशित मिति ९ असार २०७५, शनिबार ११:२९ लेखक संगम ढकाल
लन्डन । बेलायतको पूर्वउपनिवेश युरोपेली मुलुक माल्टामा नेपाली कामदारको माग बढ्दै गएको छ । वर्क परमिट लिएर काम गर्न यो वर्ष मात्र झन्डै ६ सय नेपाली त्यहाँ पुगेका छन् । विशेषगरी पर्यटन क्षेत्रमा नेपालीको माग बढी छ ।
क्लिनर, वेटर, अकाउन्टेन्ट क्लर्क र हाउस किपिङमा नेपाली संलग्न छन् । यिनीहरूको मासिक न्यूनतम कमाइ करिब ७ सय ३५ युरो छ ।
युरोपको मुख्य पर्यटकीय गन्तव्य माल्टामा नेपालीको माग बढिरहेको लन्डनस्थित नेपाली दूतावासका उपनियोग प्रमुख शरदराज आरणले बताए । लन्डनस्थित नेपाली दूतावासले नै कामदार माग प्रमाणीकरण गर्छ । ‘हामीले गत माघमा मात्र ५ सय ५० जनाको प्रमाणीकरण गर्‍यौं । माल्टा जानेमा महिला–पुरुष बराबर छन्,’ आरणले कान्तिपुरसँग भने, ‘माल्टा अध्ययनका लागि होइन, काम गर्न उचित गन्तव्य बनेको छ ।’
नेपालबाट एजेन्टहरूले माल्टामा विद्यार्थीलाई राम्रो अवसर छ भनेर झुक्याए पनि यथार्थमा त्यस्तो नभएको दूतावासको भनाइ छ । नेपाली जाने क्रम बढेपछि नेपाल र माल्टाबीच श्रम सम्झौताका लागि गृहकार्य भइरहेको छ ।
बेलायत तथा गणतन्त्र माल्टाका लागि नवनियुक्त गैरआवासीय राजदूत डा. दुर्गाबहादुर सुवेदीले गत महिना माल्टाकी राष्ट्रपति मारिई लुइज कोलिरो प्रिकासमक्ष आफ्नो ओहोदाको प्रमाणपत्र पेस गर्ने क्रममा यसबारे कुरा उठाउँदा सकारात्मक जवाफ आएको आरणले बताए ।
नेपाल र माल्टाबीच दौत्य सम्बन्ध सन् १९८३ मा कायम भएको हो । काठमाडौंमा माल्टाको अनरेरी कन्सुलेट छ भने लन्डनस्थित नेपाली दूतावासले माल्टासम्बन्धी मामिला पनि हेर्छ ।
राजदूतले माल्टामा पर्यटनमन्त्री, श्रममन्त्रीलगायत रोजगारदाता कम्पनीका प्रतिनिधिसँग भेट गरी नेपाली कामदारको अधिकार, सेवा सुविधा आदिबारे छलफल गरेका थिए ।
माल्टामा नेपालीको कुल संख्या ८ सय ५० हाराहारी र अध्ययनका लागि ६० जति विद्यार्थी छन् । यसअघि विद्यार्थीलाई काम गर्ने अनुमति नभए पनि दूतावासको पहलपछि २० घण्टा प्रतिसाता काम गर्ने व्यवस्था भएको आरणले जनाए ।
लन्डनस्थित दूतावासले यसै वर्ष युरोपेली संस्कृतिको राजधानी भालेटा (माल्टाको राजधानी) मा नेपालको पर्यटन प्रवद्र्धनसम्बन्धी कार्यक्रमसमेत गर्ने भएको छ । भालेटाले सन् २०१८ लाई ‘युरोपियन क्यापिटल अफ कल्चर’ का रूपमा मनाइरहेको छ ।
केवल चार लाख जनसंख्या भएको माल्टा सन् २००४ मा युरोपेली संघको सदस्य बनेको हो । युरोजोन क्षेत्रको सबैभन्दा सानो अर्थतन्त्र रहेको माल्टाको अर्थतन्त्र व्यापार, पर्यटन र उद्योगधन्दामा आधारित छ ।
एमाले–माओवादी संसदीयदलको संयुक्त बैठक बस्दै, पार्टी घोषणको अन्तिम तयारीमा !
काठमाडौं । एमाले–माओवादी संसदीय दलको बैठकअाज बस्दैछ । नयाँ बानेश्वरस्थित संसद…
मन्त्रिपरिषदबाटै ढुकुटी दोहन
काठमाडौं । राज्यको ढुकुटी दोहन गरेर कार्यकर्ता पोस्न र मन्त्री तथा कर्मचारी विदेश भ्रमणमा सरकारले १ बर्षको अवधिमा…
नयाँदिल्ली । बलिउड अभिनेता राजपाल यादवलाई अदालतले ६ महिनाको जेल सजाय सुनाएको छ । चेक बाउन्स गरेको अभियोगमा चर्चित…
नेपालले बुद्धका उपदेश वाचन गरी भारतको रेकर्ड तोड्यो
काठमाडौं । एकै पटक शाक्यमुनि गौतम बुद्धका उपदेश वाचन गरी नेपालले विश्व रेकर्डको लागि सङ्ख्यात्मक रुपमा भारतमा रहेको रेकर्ड…
‘मन्त्रीलार्इ सुझाव दिन डलर खर्च गर्छन’
काठमाडाैँ । राजनीतिक दलका नेताहरूमा सामाजिक सञ्जालप्रतिको मोह बढ्दो छ । प्राय सबै शीर्ष नेता नयाँ र ताजा सूचना…
‘बिदा अधिकार होइन’
काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले सार्वजनिक बिदा अधिकार नभई कार्यकारिणीको तजबिजी बुद्धिमताको विषय भएको व्याख्या गरेको छ। केही महिनाअघि सुनाइएको…
सक्कली कम्पनी, नक्कली विमा, अरुको नागरिकताबाट ६८ करोड ठगी 33 views